Isikhungo Sokwelapha I-Proton Radiation Therapy Cancer Treatment - California Proton
BHEKA UKUTHI SINIKELA KANJANI UKUQASHWA KWABANTU OKUPHEPHILE KANYE NOKUQOKWA KWE-TELEMEDICINE
Izinketho ze-Telemedicine Manje Ziyatholakala
Ukucinga Isiguli Portal858.283.4771
I-Pancreatic & Bile Duct
Ukubuka konke kokusekelwa kweziguli
Izindleko & Ukuhlanganiswa
Yilwa nomdlavuza nge
Uma utholakale okokuqala ngqa, noma ubhekene nomdlavuza ophindaphindiwe, ukwelashwa kwe-proton kungaba yindlela yakho engcono kakhulu njengenye yezindlela zokwelashwa zomdlavuza eziphephe kunazo zonke nezisebenza kahle kakhulu emhlabeni.
Ukwelashwa kwe-Proton kuyindlela ehlaselayo engahlaseli, kunconyelwa izinhlobo eziningi zomdlavuza obekulokhu kulawulwa ngazo ngokwesintu izindlela ezifana nokuhlinzwa, ukwelashwa ngamakhemikhali kanye nemisebe ye-X-ray. Kutholakale eSan Diego, eCalifornia Protons Cancer Therapy Center ophambili ekunakekelweni kwezokwelashwa, ocwaningweni kanye nase-biotechnology. Ngaphezulu kweminyaka engama-50 yokuhlangenwe nakho okuhlangene kwe-proton, odokotela bethu abadume umhlaba wonke basebenzisa izindlela zokwelapha ezilwa nomdlavuza kanye namathuluzi wokwelapha umdlavuza ovamile futhi onqabile kakhulu.
Ukwelashwa kwe-Tumor Radiation
Yethulwe ngokuqondile ngaphakathi kwamamilimitha ama-2, ubuchwepheshe bokuthwebula amapensile bokuqina bokushintshwa kwamapensela, okunikezwe kuwo wonke amagumbi amahlanu wokuthola ukwelashwa, kukhipha umthamo ophakeme wemisebe ebulala umdlavuza ehambelana ngqo nobukhulu nobukhulu besimila. Lobu buchwepheshe obukhonjwe kakhulu buhlasela isimila ngokunemba okufana ne-laser, ngenkathi sisindisa izicubu nezitho zomzimba ezizungezile.
Isikhungo Sokwelapha I-San Diego Cancer
Ekhaya lelinye lamaqembu e-radiation oncology anolwazi lomhlaba endaweni yokwelashwa kwe-proton therapy, odokotela bethu bayahlonishwa emhlabeni jikelele futhi bafunwa yiziguli ezivela emhlabeni wonke. Eqinisweni, umqondisi wethu wezokwelapha uye welapha mathupha izifo ezingaphezu kuka-10,000 XNUMX zomdlavuza wesinye — ngaphezu kwanoma ngubani osemhlabeni.
Funda kabanzi ngesikhungo sethu sokwelapha umdlavuza.
Isikhungo Sokwelapha Umdlavuza
Ukusuka kodokotela bethu ukuya ezinsizakalweni zezinsizakalo zokuxhasa izinhlelo, sinikela ngezinga eliphakeme lokunakekelwa kweziguli okwenzelwe wena esikhungweni sethu sokwelapha umdlavuza. Abasebenzi bethu bonke bazinikele ekulweni nomdlavuza womuntu ngamunye futhi nsuku zonke silwela ukudala indawo lapho iziguli zethu, imindeni yabo kanye nabangane bazizwa bemukelwa umphakathi ogcwele abantu abanobungane, abasizayo abaphatha wonke umuntu ngendlela abebengenza ngayo amalungu abo emindeni.
Ingabe i-Proton Therapy
Ukwelashwa ngemisebe yeProton kungasetshenziswa kuphela, noma kuhlanganiswe nokuhlinzwa nokwelashwa ngamakhemikhali, ukwelapha izinhlobo eziningi zomdlavuza nezimila, kufaka phakathi kepha kungagcini lapho:
Umdlavuza Wekhanda Nentamo
AmaBrain & Spine Tumors
I-Proton Therapy vs.
Imisebe ejwayelekile ye-X-Ray
Imisebe ye-X-ray ejwayelekile kanye nokwelashwa kweproton zombili lezi zinhlobo ze “radiam yangaphandle” radiotherapy. Kodwa-ke, izakhiwo zalowo nalowo zihluke kakhulu futhi ziphumela emazingeni ahlukahlukene okuvezwa kwemisebe kwisiza se-tumor nezicubu eziseduze nezitho zomzimba.
Imibuzo mayelana nokuhlanganiswa komshuwalense nokwelashwa?
Bengifuna ukuphila impilo ende futhi bengingafuni ukuzibeka engcupheni yokuhlaselwa yisifo senhliziyo noma ukulimala kwenhliziyo, ngakho-ke ngakhetha i-proton therapy. Ngemuva kokubonisana kwami ​​noDkt Chang, ngivele ngazi ukuthi iConcons yaseCalifornia yilapho engifuna ukuba khona. Uchithe isikhathi esiningi nami futhi ngazizwa nginethemba elikhulu ngekhono lakhe.
Isiguli Somdlavuza Webele
Ukwelashwa kweProton 'kwakuwushintsho lomdlalo.' Alukho usuku oludlula lapho engingacabangi ukuthi saba yinhlanhla enkulu kanjani yokuhlala ngamakhilomitha ayisithupha ukusuka kwesinye sezikhungo ezinhle kakhulu zephrothoni emhlabeni. Zonke izisebenzi ziyamangaza. Ukuhawukela, ulwazi nokulandelwa kwakumangalisa.
Ubaba ka Kasey Harvey
Isiguli Sabantwana Rhabdomyosarcoma
Angibanga nemiphumela emibi ngokuphelele ekwelashweni kwami. Ngiqeqeshe amaqembu abesilisa nabesifazane bezwe lami kuzo zonke izindlela zami zokwelapha, ngaphandle kokuphutha ngosuku olulodwa. Ngiye ngakugcina ukusondelana engikwazisa kakhulu nomkami uJoAnn, futhi ngihlala ngisebenza njengobaba nomeluleki emphakathini.
Isiguli Somdlavuza Womdlavuza
Sikhethe ukwelashwa kwe-proton ngenxa yekhono layo lokungena ngokuphepha ku-brainstem ukufinyelela ingxenye yesimila esasingathintwa ngaphambili. Futhi njengoba ubuchwepheshe baseCalifornia Protons buyinto entsha futhi ethuthuke kakhulu ezweni, sicabange ukuthi 'kungani uye kwenye indawo?'
Ubaba ka Natalie Wright
Isiguli Sengqondo Yesibeletho Sabantwana
I-blog ekhuluma ngethemba, ukuphulukisa namandla okunqoba. Funda kabanzi
I-Proton Therapy Treatment FAQs
I-Glossary of Terms
Hlela Ukuvakasha Kwakho
I-9730 Summers Ridge Rd
I-San Diego, CA 92121
© 2022 California Protons Cancer Therapy Isikhungo Inqubomgomo yobumfihlo Imigomo Nemibandela
Internet Ividiyo Radio Indawo TV Social Media Isihloko Sezindaba Isiguli Sangaphambili noma Samanje Umndeni noma umngane Ukudluliselwa Kwedokotela Ukudluliselwa Kwezibhedlela Ukudluliselwa Komshuwalense Izincwajana zemininingwane Uzwe kanjani ngathi?*
Uma kungenjalo, sicela usho
Ikheli lesitaladi Umugqa Wekheli 2 imizwa State AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireE-New JerseyNew MexicoI-New YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingAmabutho ahlomile aseMelikaAmabutho ahlomile eYurophuAmabutho ahlomile Pacific Ikhodi ye-ZIP
HematologyI-Oncology yezokwelaphaI-Pediatric OncologyI-Radiation OncologyOncology steelI-Oncology NursingI-physicsImikhawuloIzincwajana zemininingwane
Uzwe kanjani ngalo msebenzi?
Incwajana / Iposikhadi ku-imeyili
Incwadi Yobuntu / Isimemo
Umqondisi / Umphathi